Weriye lagu dilay magaalada Gaalkacyo | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Weriye lagu dilay magaalada Gaalkacyo
Weriye lagu dilay magaalada Gaalkacyo
GAALKACYO — Koox hubaysan ayaa Waqooyiga Gaalkacyo ku dilay wariye Jamaal Faarax Aadan oo ka mid ahaa wariyaasha gobalka Mudug.
Jamaal Faarax Aadan oo in muddo ah kasoo shaqeeyay qaybaha warbaahinta deegaanada Puntland, islamarkaana mar soo noqday maamulka idaacadda Daljir qaybteeda Gaalkacayo ayaa mudda ka maqnaa saaxada saxaafadda.
Dilka Jamaal Faarax Aadan oo ka dhacay goob ganacsi oo uu marxuumku ku lahaa xaafadda Siinaay, ayaa sida ay gobjogayal u shegeen VOA, waxaa gaystay laba dhallinyaro ah oo bastoolado ku hubaysan
Laamaha amniga gobalka Mudug ee dhanka Puntland oo goobta gaaray ayaa billaabay howlgal balse ma aysan sheegin cid loo qabtay dilka.
Ururka isu-tagga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ ayaa cambaareeyey dilka weriyaha.
Wararkii u danbeyay halkan hoose riix
Galmudug news update
Previous articleDegdeg Warmurtiyeed laga soo saaray Shirkii U dhaxeyey Mucaradka iyo Dowlada iyo isfahan laga gaaray banaanbixi
Next articleFreelance Journalist Shot Dead In galkayo